Imwe yenyaya. Goths, Erotic, Victorians, Republican, uye Vatema | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Nyaya
Nyaya dzinogara dziripo. Uye muzhizha, kune yakasviba, avo vanoisa zviso pamberi pemanovhisi emapeji mazhinji, iri nyore sarudzo? Zvinoenderana nenyaya dzipi, chokwadika. Ichi ndicho chimwe kusarudzwa kwe6 compilations nyaya dze dzakasiyana siyana uye nguva. Ivo vakasainwa nemazita akaita se Agatha Christie o Raymond Chandler, kana maVictorian Thomas Hardy naElzabeth Gaskell. Uye isu zvakare tine French Marquis De Sade yatove yemunhu manchego senge Francisco Garcia Pavon.
1 Nyaya Dzakakwana - Agatha Christie
3 Comics, ngano uye ngano - Marquis de Sade
4 Nyaya Dzakazara - Thomas Hardy
5 Republican tales - Francisco García Pavón
6 Dzese Nyaya - Raymond Chandler
Pedzisa nyaya - Christie Agatha
Uyu kuumbwa ine zvese zvipfupi zvakanyorwa nemunyori wequintessential chakavanzika, Agatha Christie. Ivo vanounganidzwa mu nhevedzano yenguva umo iwo akabudiswa muUnited Kingdom. Semuenzaniso, Hercule Poirot akatanga kubuda mune pfupi nyaya iri mumagazini Sketch muna 1923, uye ndiwo mabudisirwo azvakaitwa: mumagazini vhiki nevhiki nemwedzi.
Ivo ndeimwe imwe sampuro yetarenda remunyori uye ivo vanobata kubva umhondi, kuba uye kubiridzira nyaya izere nekusahadzika, kunyangwe avo vanokwira madimikira anoshamisa. Dzimwe dzenyaya dzainosanganisira ndedze Iyo yekunakidzwa kweiyo «Nyeredzi yeWestern», Njodzi paMarsdon Manor, Iko kunakidzwa kweye yakachipa imba o Kubiwa kwemamiriyoni emadhora muzvisungo.
Gothic ngano - Elizabeth Gaskell
Elizabeth Gaskell ndomumwe wevanonyanya kunyora mabhuku e kukunda kwechokwadi. Mune idzi nyaya iye akabatanidza akanyanya echinyakare zvinhu eiyo gothic genre zvakakosha ipapo: kunyangarika zvinoshamisa, fantasmas kutsiva, machinda uye vanokudzwa vane hupenyu huviri hwemhondi nemakororo, kuvharirwa munhare, kutuka dzinopandukira vazukuru vaiye akavadana, kutambudzwa kusingaite kana kupukunyuka kunorwadza. Zvese izvi zvine chimiro che magamba zvakare yakanyanya kuzivikanwa nemamiriro avo sevakadzi.
Comics, ngano uye ngano - Marquis de Sade
Sei kusanganisa mweya we Donatien Alphonse Francois, iyo Marquis de Sade yeshamwari, muzhizha rinopisa? Izvi Comics, Ngano uye Ngano zvakaburitswa mu 1788 uye, kunyangwe ichirondedzerwa seinonyadzisa muzuva rake, sezvaive basa rake rese, iyo Marquis de Sade inogona zvakare kutariswa se hunhu uyo anopomera mavari unyengeri hwenguva yake.
Iri zita ndere muunganidzwa wakakura wenyaya pfupi kwazvo izvo zvinotaura kwatiri zverudo uye bonde mune akawanda mativi. Kune kubva kune vasina mhaka vadiki vane rudo, kusavimbika, kudzorera kutsiva, threesomes, kukanganisa, kuyananisa kwevakaroora, libertine vanhurume, vanofarira voluptuous. Uye iro meseji yetsika inoenderana navo vese.
Pedzisa nyaya - Thomas Hardy
Iri vhoriyamu rinounza pamwechete iyo mabhuku mana enhau kuti munyori wechiRungu akaburitsa muhupenyu pamwe nevamwe, asina kutsikiswa kana kuburitswa mumagazini. Inosanganisira Ngano dzeWessex, Boka reVakadzikadzi Vakanaka, Zvishoma Zvishoma zveHupenyu y Murume akachinja uye dzimwe nyaya. Ivo vanonyanya kufemerwa neiyo tsika yemuromo uye pakati padzo pane ngano dzezvakaitika kare, ngano dzine zvinhu zvinonakidza, ngano dzehunyanzvi uye hunyengeri, nezvimwe zvinoshamisa.
Republican ngano - Francisco García Pavón
Iri bhuku ndere inofungidzirwa seyakanakisisa yemunyori Tomellosero García Pavón uye anochengetedza iyo ttsika ono yeanozivikanwa kwazvo achitarisa zvisinga tsanangurike Pliny. Iyo zvakare ine zvinhu autobiographical uye zvinoenderana nemakore aJehovha Chechipiri republic. Nekudaro, kukwidziridzwa kwerusununguko nemanzwiro e republican zvakare anotendera kuyeuka kwekudzidza kwavo kwakakosha.
Ivo zvakare a great show of social realism inotsanangurwa nemutauro chaiwo, lyricism uye yakanaka mibairo inosetsa inozivisa munyori. Uye haina kurasikirwa kushanda kwayo kana kufarira.
Nyaya dzese - Raymond Chandler
Iyi ndiyo chinyorwa chakazara chete che 25 nyaya weAmerican tenzi wematikitivha mabhuku. Raymond Chandler akatanga kuburitsa nyaya mu magazini akakurumbira Chemhondoro Nhema Masiki asati anyora zvinyorwa zvake zvine mukurumbira. Mavari akagadziridza hunyanzvi uye maitiro uye akavaka iwo pasi hunhu hwebasa rake. Vari nyaya dzakananga maanotiisa mazviri mhepo yechisimba iyo yavanofamba nayo zvishamiso magambakutonhora uye kusurukirwa kunoguma mukusika kwake kunorangarirwa kwazvo, Philip Marlowe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nyaya » Imwe yenyaya. Goths, Erotic, Victorians, Republican, uye Vatema